Ndi mmadu na ntukwasi obi na ịde blọgụ | Martech Zone
Ndi mmadu na ntukwasi obi na ịde blọgụ
Tọzdee, Ọktoba 30, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ana m ele ozi ọma taa ma e nwere ọtụtụ okwu gbasara echiche gbagọrọ agbagọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana otu esi ewepụta ya wee nyocha ya. Mgbasa mgbasa ozi ka na-ekerekwa òkè dị ukwuu na ntuli aka ahụ, ebe anyị na-ahụ ka a tụbara nde kwuru nde na mgbasa ozi telivishọn. Ọ bụ ntuli aka rụrụ arụ na nke m ga-enwe obi ụtọ ịhụ njedebe nke adịghị anya.
Isi ngosi nke mkpọsa bụ n'ezie na andntanetị na a votu ikike (ma ọ bụrụ na ha na-ewute iji ya) na- nyochaa eziokwu na onye ọ bụla n’ime ndị na-azọ ọchịchị (onye ọ bụla chọrọ, ọ bụghị naanị President). Ekwenyere m na ndị na-ede blọgụ enwekwuola eziokwu, nghọta na ikpughe mkparịta ụka banyere ndị na-aga ime ụlọ karịa otu ụlọ ọrụ telivishọn ọ bụla.
Mụ na ndị enyi m enwela mkparịta ụka dị mkparịta ụka n ’ntanetị ma n’ ime mkpọsa ahụ. Ọ bụ ezie na m na-ahụ ụfọdụ ihe pụtara, okwu mkparị na-apụta site n'oge ruo n'oge, ndị ahụ m na-egwu ma na-ede blọgụ na-asọpụrụ m ma ana m asọpụrụ ha, n'agbanyeghị nhọrọ anyị na-eme. Nke ahụ mara mma.
Nke bụ eziokwu bụ na Internetntanetị, na ịde blọgụ, ewetala ihu mmadụ na nkwukọrịta nke oge a. O nwere ike ịbụ na anyị ahụtụbeghị, mana ị matala m na blọgụ m. Fọdụ ndị folks ahapụla, mana ndị nke nọgidesiri ike yiri ka ha nwere ekele maka ihe m na-ekwu ma enwere m mmasị n'eziokwu na enwere m ike isoro gị kerịta ihe m hụrụ. Enwere ntụkwasị obi n’etiti anyị!
Mgbasa mgbasa ozi arụsiwo ọrụ ike n'ịmepụta echiche na-adịghị mma banyere ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị, nnukwu azụmahịa, na ndị iro anyị na mba ọzọ. Echere m na ọ dị mfe ịmanye gị ịkpọasị mgbe enweghị mmadụ na nsọtụ ọzọ. Ọtụtụ caricatures anyị na-ahụ na telivishọn (na m na-ekweta, Youtube) na-deere n'ụzọ nke na ọ dị mfe enweghị mmasị ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù mmadụ.
Azịza ya bụ ịde blọgụ
Azịza, m chere, bụ Blog. Achọrọ m ka ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-ede blọgụ (na-enweghị ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ ha na-edegharị na na-enyocha ọdịnaya). Achọrọ m ka ndị isi ahịa anyị blogged. Achọrọ m ịma ihe dị n'isi ụmụ okorobịa ahụ na Exxon. Achọrọ m ịma ihe kpatara azịza blog na-akatọ ụlọ akụ anaghị azaghachi kemgbe ihe karịrị otu afọ. Achọrọ m ịma ihe mere nnyefe ụlọ ọrụ ga-kama foreclose karịa refinance ahịa ha 'nrọ obibi.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na-enye ihe akaebe na blọọgụ bụ akụ a tụkwasịrị obi maka ndị na-azụ ahịa. Amaara m na ụlọ ọrụ nwere naanị ebumnuche ịkpata ego. Mgbe ụlọ ọrụ mara na ego ahụ ga-abịa mgbe ha gosipụtara ụmụ mmadụ na nghọta, ha ga-aga n'ihu izere ịde blọgụ?
Ọdịnihu bụ ịde blọgụ
M na-atụ anya, n'ime afọ ole na ole, ka mụ na ndị azụmaahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. M na-atụ anya naanị ịme ntuli aka maka ndị ga-aga blog. Ana m atụ anya ịkwado ụlọ ọrụ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere ike ịtụkwasị obi ma gosipụta ihere na-egosi mmadụ ha. M na-ele anya na blọọgụ na-ebu ibu karịa azụmahịa, ma ọ bụ ego ejiri, ma ọ bụ ọbụna mgbasa ozi mgbasa ozi.
Enwere m olileanya na Google nwere ike ijide mkparịta ụka niile!
Tags: tinye njikọAnalyticsemume ezumikeInfographics Ahịannyefesmart ọkọlọtọ
Douglas Karr Thursday, October 30, 2008 Sunday, October 4, 2015
Ọ bụrụ n’ịchọghị Echiche M, I Kwesighi ịjụ!
Obama Ndi Osote Vista?
Ọkt 31, 2008 na 7:18 AM
Ezigbo ihe, Doug. N'afọ a, emere m ezigbo nyocha n'ịntanetị tupu m mee mkpebi banyere ndị na-agba n'ọfịs mba na mpaghara. Achọtara m ezigbo ego nke blog nwere ozi iji nyere m aka ịme echiche nke m. Obi dị m ụtọ karịsịa na oke ozi dị na ndị na-aga ime obodo site na blọọgụ; enwere ụfọdụ ndị obodo anyị na-anụ ọkụ n'obi na-achọ ịnụ. Dịka i kwuru, anyị agabeghị ebe ndị na-aga ịde blọgụ, yabụ anyị kwesiri idozi okwu ndị na-akwado ha na ndị na-ekwujọ anyị.
Ọkt 31, 2008 na 8:51 AM
Doug, nke ahụ bụ ọkwa magburu onwe ya.
Ka ọ dị ugbu a, ya na mba jidere n'apịtị nke mkpọsa mkpọsa onye isi ala, ọ na-ada ụda eziokwu. Ike gwụrụ m nke ndị mmadụ ikwere asịrị na innuendo nke “igwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị” nke oge a dabere na ụbọchị ndị a. Ọtụtụ ndị m na-agwa okwu kwenyere asịrị ahụ karịa nyocha na mụta eziokwu maka onwe ha. N'ezie, ọ bụ anyị kpatara ya maka ịdabere kpamkpam na mgbasa ozi mgbasa ozi ogologo oge. Mana nke ahụ na-agbanwe, ọ bụghị ya?
Enwere m ekele maka ike nke ịntanetị na ike ọ na-enye n'eziokwu, ndị na-ede blọgụ nwere ọgụgụ isi nwere ike imeghe anya anyị. N'ezie, ndị na-ede blọgụ na-anaghị akwụwa aka ọtọ na-agagharị mgbe niile na-agbagọ eziokwu maka ebumnobi ha, mana anyị na-ewere ezi ihe na ndị ọjọọ. Ka o sina dị, ekwenyere m na blọọgụ ga-anọgide na-agbanwe otu esi akọrọ ozi na eziokwu na echiche n'etiti ọha na eze.
N'ihe banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ana m atụ anya na ọ nwere ike ime ka US si na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị nke oge ochie (aka ekpe na aka nri ike) gaa n'ọtụtụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-anọchite anya echiche dị oke ala n'etiti oke. Ekwesịrị m iche na enwere ndị nlele anya dị oke ala nke ndị America nwere ike ghara ịdaba na ogige Democratic ma ọ bụ nke siri ike na Republican. Ruo ugbu a, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ dị ka ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndị nwere ọgụgụ isi achọtabeghị olu dị mkpa, mana ịntanetị nwere ike ime mgbanwe. Kedu ihe ị chere? Anyị enwere ike ịnwe ezigbo usoro pati 2 ma ọ bụ 3 afọ iri na abụọ site ugbu a.
Nov 1, 2008 na 12:06 PM
Ọ dị ịtụnanya na ọtụtụ ndị isi anaghị ede blọgụ. Ha ga-atụ ụjọ ime ihe na-adịghị mma. Ekwenyere m na stats ugbu a bụ ihe dị ka% 12 nke akụ 500 bara ụba nwere blog. Nke ahụ bụ ihe nwute.
Ana m atụ anya ịhụ blọọgụ ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ. Echere m na ọ bụ ụdị omume a ga - enyere ha aka ịzụlite ntụkwasị obi na mmekọrịta miri emi na ndị ahịa. Amaghị m ihe kpatara na ha enwetaghị nke a!
Dee 17, 2008 na 5: 02 AM
Mgbasa Ozi maka? A TRANSPARENT MASS? MEDIA?
N'ọgbụgba maka uru dị egwu na nke ka ukwuu, anyị jiri iji gbagọọ eziokwu ahụ.
Anyị na-ewetara gị ụfọdụ eziokwu na-adịghị mma nke anaghị enye anyị nsogbu ma anyị na-alụ ọgụ megide ya!
1. Ihe ngosi, ya na mgbe nile na akụkọ akụkọ banyere akụkụ ndị na-adịghị mma, akọwapụtara nke ọma, na-akwado akụkụ ma ọ bụ na-ezighi ezi.
2. Ihe nlere anya nke ndị Romania n'ime ụwa site na iwe nke echiche na-enweghị ikike nke na-akpọ mba niile mgbe omume otu onye nke ụfọdụ ndị Rom, ma ọ bụ nke kachasị njọ, nke ụfọdụ Rromi (Gipsy) nke nwere nsogbu na iwu.
3. Ikwughachi otu ozi ọma na oge buru ibu ma ọ bụ obere.
4. Ọdịiche nke oge ụfọdụ, dị ka iwu iji soro ma ọ bụ njirimara mba.
5. na-anara ozi a na-achịkwaghị achịkwa n’aka ndị nwere mmasị ma na-anọ n’okpuru triangle rụrụ arụ? nwoke ochichi? nwoke azụmahịa? onye mgbasa ozi mgbasa ozi, nke na-eme ka uche gị pụọ na ezigbo ihe kpatara ihe ndị ahụ.
6. Ọtụtụ mgbe, anyị na-ahụ ka mgbasa ozi na-abụghị ọkachamara nwere dị ka protagonists ụfọdụ odide, ụmụ amaala nke nwere nsogbu na iwu, na-enwe obere okwu, ebe a na-ekpughere ozi metụtara na nzuzo ndụ ma ọ bụ nke ọnwụnwa. Anyị na-adọ gị aka ntị na enweghị ike ịme ikpe ikpe na telivishọn ma ọ bụghị na-emetụta usoro nyocha site n'ụdị ụdị ọ bụla ma ọ bụ ntụgharị nke na-ekwu na ọ bụ nyocha akwụkwọ akụkọ. Anyị na-ajụ onwe anyị na ezigbo ihe kpatara ya, ọ bụrụ na mgbasa ozi mgbasa ozi emepeghị onye isi obodo ya.
7. Ka anyị wezuga onwe anyị n'ime mbọ iji gosipụta obi ekele maka ụlọ ọrụ steeti ahụ, iji gbaa ọgbaghara ọgbaghara na otu ndị nwere mmasị pụrụ iche nke nwere nzube mbibi nke ike na ikike nke mba Romania dị ka steeti ziri ezi na nke onye kwuo uche ya.
8. Dika anyi mara, iwu ala nke ala, akwukwo iwu nke Romania, na-ekwuputa ihe doro anya na edemede 30, paragraf nke 6: ?; paragraf nke 7:? amachibidoro iwu obodo na mba, mmetọ nke mmegide ahụ, na mba, agbụrụ, klaasị ma ọ bụ okpukperechi asị, ịkpalite ịkpa oke, na mpaghara
nkewa na ime ihe ike nke ọha, na ngosipụta rụrụ arụ, nke megidere omume ọma. Nakwa na isiokwu 31, paragraf nke 3, na-azọrọ na 'ikike ị nweta ihe ọmụma enweghị ike ịkpọasị usoro nchebe nke ndị na-eto eto ma ọ bụ nke nchekwa obodo.
9. N’ọnọdụ a, anyị na-atụ aro ka anyị mepụta ihe nwere ikike nke iwu, National Council Against Manipulation ?, dị ka nke dị ugbu a, aha ya bụ “National Council for Disproof of Discrimination ?, nke ga-enwe ebumnuche iji mebie mgbasa ozi, iche echiche na echiche. agha, machibidoro ị intoụbiga mmanya ókè nke echiche ọha mmadụ site na nkwupụta, kamakwa ozi gbasara.
10. Anyị na-agwa onwe anyị na Onye isi ala Romania, Maazị Traian Basescu, ka anyị tinye ikike iwu obodo, na-ekwu banyere edemede 30, paragraf nke 5, nke na-ekwu na: Iwu nwere ike ịmanye ndị mgbasa ozi ọrụ nke ime ka ọha na eze bụrụ isi mmalite nke ego ?.
Ndị Omeiwu ga-enwe nnukwu ọrụ iji mezue ma mezue iwu nchekwa ozi, site na ịjụ ajụjụ? Obodo na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ?.
Echiche nke ndị nwere mmasị na mkpọsa a ga-ebipụta na Romania na mba ofesi.
Onye isi nke MASS Nkwado IKE